Drip, Drip, Drip ... Iibso | Martech Zone
Isniintii, September 6, 2010 Isniin, Maarso 14, 2016 Douglas Karr
Qofna ma sugayo tweet-gaaga soo socda, cusbooneysiinta xaaladda ama boostada blog-ka si ay u iibsadaan soo socda. Had iyo jeer waxaa jira fursad aad ku dhiirrigeliso qof inuu iibsado, laakiin waa wax aan macquul aheyn in la saadaaliyo goorta rajadu ay diyaar u yihiin inay iibsadaan soo socda. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay inaad halkaas joogto marka rajadaadu tahay waa diyaar u ah go'aan.
Xagee bay joogi doonaan Waxaan ka fahamnay habdhaqanka khadka tooska ah ee hadda jira in inta badan rajooyinka internetka ay isticmaali doonaan mashiinka raadinta. Waa maxay ereyada muhiimka ah ee ay raadin doonaan? Ma waxay ka raadsanayaan degaanka cilmi-baaristooda? Ma ku jirtaa natiijooyinka mashiinka raadinta halka ay raadinayaan? Hadday kheyraad ka dhex raadsadaan shabakadooda, ma tahay kheyraad lagu kalsoon yahay oo halkaas jooga?
Blogging-ku waa waxqabad weyn oo khadka tooska ah ah maxaa yeelay wuxuu kuu ogolaanayaa inaad xoqdo macluumaadka oo aad heli karto Goorma rajada ayaa raadineysa xalka. Kuma filna inaad wax ku qorto. Waxaan ku riixeynaa martidayadu inay isku qoraan quudkeena, ku qortaan joornaal, na raacaan Twitter, nagu taageeraan Facebook, ama nagu xirmaan LinkedIn si aan fursad ugu helno inaan joogno marka ay diyaar u yihiin inay wax iibsadaan.
Suuqgeynta iimaylku waa shey weyn oo dib loogula xiriiro macaamiishaas 'laga yaabo' inay wax iibsadaan dhowaan. Waxaa laga yaabaa inay cilmi baaris ku sameynayaan khadka tooska ah, waxay kaa heleen mashiinka wax raadinta, oo waxay qoreen si ay isha kuugu hayaan kuna xirmaan markay diyaar u yihiin inay wax iibsadaan.
Shabakadaha bulshada ayaa si weyn u adeegsada dhismaha maamulka iyo kalsoonida, iyo u soo bandhigida shakhsiyadda meheraddaada qof raba inuu kula ganacsado. Mar labaad, adoo ku sii joogaya joogitaankaaga himiladaada… halkaasaad joogi doontaa markay go'aansadaan inay iibsadaan.
Daabacaadda qoraallada, tweets-ka daadanaya, faallooyinka daadinaya, iyo cusbooneysiinta qulqulaya kuma eka oo kaliya inaad maskaxdaada ku hayso, sidoo kale waxay ka fidisaa dadka ku jira shabakaddaada dadka ku dhex jira shabakadaha kuwa raacsan, iyo shabakadaha raacsan, iyo sii socoshada.
Inaad maskaxda ku hayso shabakadaha rajadayadu waa muhiim, dhisida kalsoonida iyo maamulka dhexdooda shabakadooda waxay hagaajineysaa fursadaheena ah inay na soo wacaan markay diyaar u yihiin inay iibsadaan. Dadku mararka qaarkood waxay isweydiiyaan, ma inaan dhigaa ilo Facebook ama Twitter? Miyaan maalgashi ku sameeyaa suuqgeynta iimaylka ama mashiinka raadinta? Miyaan bilaabayaa baloog ama ma ku xayaysiinayaa khadka tooska ah?
Jawaab sax ah malahan tan. Su'aashu dhammaan waxay ku tiirsan tahay soo noqoshada maalgashigaaga suuq-geynta. Haddii aan kaqeybqaadano bil kasta LinkedIn saacad, aan dhahno saacaddaasi waxay u qalantaa $ 250 latashiga… taasi waa $ 3,000 sanadkii. Haddii aan ka helo qandaraas $ 25,000 hoggaan ka socda LinkedIn, ma u qalantay? Dabcan waxay ahayd. Su’aashu ma ahan halkaas oo, su'aashu waxay tahay sidee isugu dheellitiri kartaa oo aad otomaatig ugu noqon kartaa ololeyaasha faleebada dhammaan dhexdhexaadiyayaashan si wax ku ool ah.
Ha ku khamaarin hal shey oo dhexdhexaad ah, rajadaadu waxay noqon kartaa meel kasta. Mar alla markii aad ku garwaaqsato dhexdhexaadiyeyaashaada ugu wanaagsan hoggaamiyeyaasha rajada badan leh, waxaad dadaal dheeri ah gelin kartaa kuwaas dhexdhexaadinta ah.
Faleebo, faleebo, faleebo… sugna iibsiga.
Tags: soo noqnoqodka boostadahubkaaContent Suuqblogging shirkadahafaleebointa jeerkobcinta